WARBIXIN-Maxaa kadhashay doorashadii aqalka hoose ee Soomaaliya (Aamina Ladan). – Radio Daljir
WARBIXIN-Maxaa kadhashay doorashadii aqalka hoose ee Soomaaliya (Aamina Ladan).
Diseembar 17, 2016 3:34 b 0
Boosaaso, Dec 17 2016-Dhowaan waxaa caasimadaha maamul goboleedyada dalka lagu soo gaba gabeeyey doorashada aqalaa hoose iyo sare ee barlamaanka Soomaaliya, iyadoona xubno kooban kadhiman yihiin doorashada aqalada gobolada Waqooyiga Soomaaliya ee Soomaaliland.
Gudiga xalliinta khilaafaadka ee doorashada dadban ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in 11 kamid ah xubnaha aqalka hoose lagu celin doono muran culusna uu kajiro, waxaana kahoryimi go’aankaasi gudiyada doorashada ee heer maamul.
Qaramada midoobeyna waxa ay ka codsatay gudiga xallinta khilaafaadka inay soo caddeeyaan sababta ay xubnahaasi ugu dhegan yihiin, Aamina Ladan Axmed Cali oo Daljir ka howlgasha ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka diyaarisay.
DHEGEYSO-Jubbaland oo Alshabaab ku eedaysay xansuuqa dad shacab ah.